बुधबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिरले चर्चा पायो। बिहान काठमाडौं गौशाला चोकको त्यो तस्बिरमा दुई जना मोटर'साइकल चालक ट्राफिक जाममा रोकिएका थिए। त्यो तस्बिरमा दुई'वटा बाइकका सवारी चालक'ले एक अर्काको नम्बर प्लेट हेर्दै गरेको देखिन्छ। दुबै मोटर'साइकलको एउटै नम्बर प्लेट देखेपछि उनी'हरूले एकअर्काको नम्बर प्लेट हेरेका हुन्। दुबै मोटर'साइकलमा बागमती प्रदेश-०२-०२२ प २३८० नम्बरको प्लेट छ।त्यही तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। सामा'जिक सञ्जा'लमा आए'पछि यसबारे काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्या'लयले पनि अनु'सन्धान गरेको छ। ट्राफि'क प्रहरी कार्या'लयका प्रहरी उ'परीक्षक सञ्जिव शर्मा दासका अनुसार यो तस्बिर बाहिरिए'पछि कार्यालयले दुबै मोटरसाइकल खोजेको हो। एउटा मोटरसाइकलका चालक भने सम्पर्कमा आइ'सकेका छन्। एनएस प्लसरका चालक ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा छन्।उनको काग'जात हेर्दा भने सबै ठीकै भएको
आजभोलि सामा'जिक संजाल अन्तर'गत विभिन्न किसि'मका संजाल`हरू छन्। जस'अन्तर्गत हाम्रो परिबेशमा फेसबुक अत्यन्तै लोक'प्रिय संजाल नेटवर्क भित्र पर्छ। सर्वाधिक जन'संख्याले यो संजाल`भित्र जोडिएका छन्। त्यसगरी पछिल्लो समय यता टिक'टक पनि सर्वा`धिक रुचाइएको सामाजिक सं`जाल भित्र पर्ने गर्दछ।अधि`कांश जनसंख्या जहाँ बुढा'बुढी देखि लिएर केटा'केटीसमेत जोडि`एर आफ्नो छोटो कला प्रश्तुत गर्ने साथै अरुले अप`लोड गरेका भिडि'यो तथा गीतमा अ`भिनय गरेको पर्याप्त भेटिन्छ'न्। कतिपय यसको प्रयोग`कर्ताहरू त टिक'टकमा आफ्नो विभिन्न भिडियो`हरू लगाएर दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराएर भाइरल नै हुने गरेका छन्। यसरी भाइ'रल हुने'हरूमा केटाकेटी,युवा पुस्ता`हरू मात्रै नभएर बुढाबुढी हरू पनि छन। उनीहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी भएता'पनी आफ्ना नानी`हरूको सह'योगमा अका'उन्ट बनाए'का हुन्छन्। टिकटक हेर्नको लागि कति`पय सानासाना नानी`हरूला
नेपालमा छायांकन गरिएको हिन्दी चलचित्र उचाइ'को प्रचार नेपाली'पनमै गरिन थालेको छ ।सुरज बाडजत्याले निर्देशन गरेको यस चलचित्रको छायांकन नेपाल'को काठमाडौं, मुस्ताङ र लुक्ला लगाय'तका हिमाली क्षेत्रमा गरिएको छ । बलिउडका सुपरस्टार'हरु अमि'ताभ बच्चन, डेनी डेन्जोङ्पा, अनुपम खेर र बोमान इरानीको नेपाली ढाका'टोपी सहितको फोटो चलचित्र निर्माण पक्षले सार्व'जनिक गरिएको छ । उक्त फोटोको बारेमा पूर्ण जानकारी नखुलाइए पनि चल'चित्रकै कुनै गीतको भएको अनु'मान गरिएको छ । नेपाली'मुलका डेनी डेन्जोङ्पा पूरानो नेपाली चलचित्र साइनो'का अभिनेता समेत हुन् । उनले तृष्णा र सम्पत्ति लगायतका चल'चित्रहरुमा पाश्र्व गायन पनि गरेका छन् ।चल'चित्र उचाइमा परिणीती चोपडा'को पनि मूख्य भूमिका रहेको छ । चल'चित्रको छायां'कनकै बेला अनुपम खेर र परिणीती चोपडाले नेपालको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । राजश्री ब्यानरका सुरज बाड'जत्या मैने प
बलिउडमा नेपाली मुलका कला'कारहरुको स्थान राम्रै रहेको छ । बर्षाै देखी बलिउडमा नेपाली कलाकारले आफ्नो सीप र श्रम खर्चि'रहेका छन् । यस्तै अभिनेता मध्ये बलि'उडका चर्चित अनुहार डेनी डेन्जोक्पा हुन् । उनले नेपाली फिल्म खेले'नन् मात्र नेपाली गीत समेत गाएका छन् । बलिउडमा त झन् उनको एकदमै राम्रो छाप र प्रभाव रहेको छ ।उनै अभि'नेता डेनी डेन्जोङ्पाले नेपालको मुस्ताङ'मा छायांकन भएको आफ्नो फिल्म ‘खुदा गवाह’अबिष्मर'णीय क्षण संझिएका छन् । त्यतिबेला उक्त फिल्मको छा'याँकन भई'रहेको थियो । जब सुटिङ सेटमा सयौं जनाले आफू र अमिताभ बच्चन चढेको कार'लाई घेराउ गरेको क्षण उनले पुनः एक पटक स्मरण गरेका हुन् ।बलिउड म्यागजिन फिल्म फेयर'सँगको एक अन्त'र्वार्तामा डेनीले उक्त क्षणका बारेमा बताए'का हुन् । त्यतिबेला आफु'हरुको कार घेराउ गर्दा आफू लाई निक्कै रिस उठेको तर अमि'ताभ बच्चनले आफ्नो हात समात्दै शान्त रहन आग्र
हनि ट्रयापको अभियो'गमा प्रहरी हिरास'तमा रहेकी भावना तामाङलाई पुर्पक्ष'का लागि थु'नामा पठाइएको छ ।भक्तपुर जिल्ला अदा'लतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नि'र्दोष नदेखिएको भन्दै तामा'ङलाई पु'र्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आ'देश दिएको हो । सोमबार थुन'छेक प्रयोजनका लागि भएको सुनु'वाइपछि भक्तपुर जिल्ला अदाल'तका न्यायाधीश माधव'प्रसाद अधिकारीको इज'लासले तामाङलाई पु'र्पक्षका लागि थु'नामै पठाउने आ'देश दिएका हुन् । ठ'गी, आ'पराधिक लाभ तथा आप'राधिक विश्वास'घातमा फुर्वा मोक्तानले दिएको जाहेरीका आधारमा भक्तपुर प्रहरी परिसरले प्रतिवेदन तयार पारी सरकारले भावनावि'रुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदा'लतमा मु'द्दा दाय'र गरेको थियो । सम्पत्ति हत्या'उन पटकपटक बिवाह गर्ने र विवाह गरेपछि सम्पत्ति लिएर सम्बन्धवि'च्छेद गर्ने गरेको प्रमा'ण भेटिएपछि रौतहट स्थायी घर भएका फुर्वा मोक्तानले भावना तामाङविरु'द्ध १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ
गायिका दिलमाया सुनारको मृ’त्युअघिको रुँदै गरेको भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित)
लोक'दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृ,त भेटिएकी छिन् । काठमाडौंको तारकेश्वर-११ नेपालटार'स्थित डेरामा उनी शनि'बार बिहान मृ,त भेटिएको प्रह'रीले जनाएको छ । शुक्रबार राति दिल'मायाले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले आफ्नो मृ,त्युमा कसै'लाई दोष नदिनु भनेकी छन् ।यस्तो छ उनले लेखेको नोट: नमस्कार सबै जनामा मिठो सम्झना छ । जिन्दगी मा उचार'चढाव धेरै भोगेँ । तर जब म जान्ने भए अनि म एक्लो भएँ । कसै'को माया माया पाउन जति कोसिस गरे पनि स'किनँ । तर पनि हार खाइनँ । तर ऐले धेरै गाह्रो भयो । म बाचेर पनि दिन'दिनै म,र्न सकिनँ ।आमा तिम्री छोरी धेरै थाकिछे । जिन्दगी को मोडमा धेरै अप्ठेरा आए । पार पनि गरेँ । जसलाई राम्रो गर्छु भने पनि भएन । म कहाँ जाऊ आमा ? दु:ख पोख्न माइती आउँ भने तिमी लाई सबै कुरा थाहा छ । म भित्रभित्रै म,रेर बाचेछु । आमा म नभएर
लोकदोहोरी गायिका दिल'माया सुनार मृ,त भेटिएकी छिन् । काठ'माडौंको तारकेश्वर-११ नेपालटारस्थित डेरामा उनी शनिबार बिहान मृ,त भेटिएको प्रह'रीले जनाएको छ । शुक्र'बार राति दिलमायाले फेसबुकमा लामो स्टा'टस लेख्दै आफू'लाई बाँच्न गाह्रो भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले आफ्नो मृ,त्युमा कसै'लाई दोष नदिनु भनेकी छन् । यस्तो छ उनले लेखेको नोट न'मस्कार सबै जनामा मिठो सम्झना छ । जिन्दगीमा उचार'चढाव धेरै भोगेँ । तर जब म जान्ने भए अनि म एक्लो भएँ । कसै'को माया माया पाउन जति कोसिस गरे पनि स'किनँ । तर पनि हार खाइनँ । तर ऐले धेरै गाह्रो भयो । म बाचेर पनि दिन'दिनै म,र्न सकिनँ । आमा तिम्री छोरी धेरै थाकिछे । जिन्दगीको मोडमा धेरै अप्ठेरा आए । पार पनि गरेँ । जसलाई राम्रो गर्छु भने पनि भएन । म कहाँ जाऊ आमा ? दु:ख पोख्न माइती आउँ भने तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ । म भित्रभित्रै म,रेर बाचेछु । आमा म नभएर के भो
चर्चित हास्यकलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ प्राय सधैँ किन देखिन्छन् मेयर बालेनसँगै ? बल्ल खुल्यो रहस्य..
काठमाडौँ महा'नगरपालिकाको मेयरको उम्मेद'वार भए'देखि नै चर्चित हास्य'कलाकार अर्जुन घिमिरे पाँडे बालेन्द्र शाहको अघि'पछि देखिदै आएका छन् । बालेनलाई जिताउन मेनरोल खेलेका समाज'सेवी समेत रहेका घिमिरे चुनावी प्रचारदेखि मतगणना हुदै मेयर निर्वा'चित भएपछिका औपचारिक र अ'नौपचारिक भेटघाट र भ्रमणमा समेतसँगै देखिदै आएका छन् । उनले बालेन्द्र'को साथ छाडेनन्। मेयरमा निर्वा'चित भए पनि शपथ ग्रहण नकुरी बालेन्द्र सिस'डोल जाँदा पनि उनी'सँगै थिए। पहिले भद्रगोल, अहिले सक्कि'गोनि नामका टेलि'सिरियलबाट घिमिरे वास्तविक नामले भन्दा पनि पाँडेको नामले परिचित उनी मेयरको शपथ ग्रहण गरेर नेपाली सेनाका प्रधानसेना'पति प्रभुराम शर्मासँग महानगरको मेयरको रूपमा बालेन्द्रले भेट गर्दा पनि सँगै थिए। महा'नगर वडा नम्बर १६ का वडा'ध्यक्ष मुकुन्द रिजालको घरमा शाह खाना खान जाँदा पनि घिमिरे'सँगै थिए। आखिर यसको रहस्य के हो त ? अनौपच
पछिल्लो समयमा नेपाली चल'चित्र उद्योग'को एउटा चर्चित नाम हो स्वस्तिमा खड्का । २०१५ मा फिल्म ‘होस्टेल रिटन्र्स’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा पाइला राखेकी स्वस्तिमा २७ वर्षि'य छिन् । उनी ४ जुलाई १९९५ मा काठ'माडौंमा जन्मिएकी थिइन् । उनले पछि ‘लभ लभ लभ’ र ‘छक्का पञ्जा’, ‘नाई नभन्नु ल’, ‘प्रेम गीत २’, ‘२ रुपैयाँ’, ‘छक्का पञ्जा ३’, ‘जय भोले’, ‘नाइ नभन्नु ल ५’ जस्ता उत्कृष्ट फिल्म'मा अभि'नय गरेपनि ‘बुलबुल’ फिल्मले भने उनलाई निकै सफ'लता दिएको थियो । यस फिल्म'बाट स्वस्तिमा'ले विभिन्न अवार्ड पनि पाएकी थिइन् । उनको फिल्म छक्का पञ्जा २ ले पनि व्यवसा'यिक रुपमा सफल'ता प्राप्त गरेको थियो । चलचित्र क्षेत्र प्रवेश गर्नु अगाडी १७ वर्षको उमेर'मा मिस टिन नेपालमा भाग लिएकी स्वस्तिमा'ले २०१६ मा २० वर्षको उमेरमा निर्देशक तथा निर्माता निश्चल बस्नेतसँग विवाह गरेकी थिइन् । अहिले उनको चल'चित्र चिसो मान्छे प्रदर्शन
अनमोल केसी युवा'पुस्तामा निकै चर्चित अभि'नेता हुन् । उनले छोटो समयमा नै असाध्यै फ्यान कमाउन सफल भएका छन् । अहिले उनको नामले मात्र पनि हलमा चल'चित्रहरु सुपर'हिट हुने गरेका छन् । यस्तै अनमोल केसी'को सानो बेलाको तस्बिर अहिले सामा'जिक सञ्जालमा निकै भा'इरल भैरहेका छन् । अनमोल सानैदेखि नै निकै क्युट भएको कुरा तस्बिर'बाटनै थाहा हुन्छ । तस्बिरमा उन'लाई निकै रिसा'लु रुपमा पनि देख्न सकिन्छ । अनमोल अहिले कुनै चल'चित्र गर्ने मुड'मा छैनन् । उनले आफूले केहीसमय रेष्ट लिन चाहेको पनि बताएका थिए । पछिल्लो समय'मा उनी अभि'नीत चलचित्र ए मेरो ३ ब्लक'बस्टर भएको थियो ।